Hindiya - Gpedia, Your Encyclopedia
"Waa kuu sujuudaa Hooyo"
Caasimada New Delhi
Af-Hindi iyo Ingriis
- Taakiikh 15 agoosto, 1947
- Total 3,287,240 km2 km²
1,269,210 sq mi
- Biyo (%) 9.56
- 2009 qiyaas 1,182,023,000
- Total $3.285 trillion
Hindiya ama Jamhuuriyadda Hindiya waa wadan ku yaala Aasiya waana wadanka Aduunka ugu dadka tirada badan marka laga reebo Shiinaha. Wadanka waxoo xuduud la leeyahay, wadamada Bakistaan, Shiinaha, Nebal, Butaan, Bangladesh iyo Burma. Dhinaca xeebaha neh waxoo xuduud la leeyahay wadamada Siri Laanka, Jasiirada Maldiif, iyo Indonesia. Magaalo madaxda wadanka waa New Delhi. Wadanka Hindiya waxaa degan dad gaaraayo in ka badan 1 Biliyan oo qof, waxaana lagu hadlaa luqado gaareeso in kabadan 100af. Hindiya waa wadanka afaraad oo ugu ganacsiga badan aduunka.
Isku-duwaha Hindiya wuxuu ku noolaa magaalada Indus Valley Civilization ee Bilihii 3-aad ee BCE. Miliicda soo socota, qoraallada ugu da'da yar ee la xidhiidha Hinduism ayaa bilaabay inuu ka koobmo. Dhaqanka bulshada, oo ku saleysan calaamad, ayaa ka soo baxay kumanaankii kowaad ee BCE, Buddhism iyo Jainism ayaa kacday. Iskudhicii hore ee siyaasadeed ayaa ka dhacay Maurya iyo Gupta; boqortooyooyinka badhtamihii u danbeeyay waxay saameyn ku yeesheen dhaqanka illaa bariga Asia. Xilligii dhexe, Judaism, Zoroastrianism, Kiristaanka, iyo Islaamka ayaa yimid, iyo Sikhism soo baxday, kuwaas oo intaa ku daray in dhaqanka kala duwan ee gobolka. Inta badan waqooyiga waxay ku dhufteen Sultanate Sultanate; Koonfureed waxay ku midoobeen Boqortooyada Vijayanagara. Dhaqaalaha ayaa balaariyay qarnigii 17aad ee Mughal Empire. Qarniga bartamihii 18-aad, ayaa hoos-u-dhac ku yimid xukunka British East India Company, iyo bartamihii 19-aad ee hoos-u-dhigga xukunka Britishka. Dhaqdhaqaaqa wadaniga ah ayaa soo ifbaxay qarnigii 19aad, kaas oo markii danbe Mahatma Gandhi loo aqoonsaday inuu yahay is-diidmo aan toos ahayn oo horseeday madaxbannaanida Hindiya 1947.
Sannadkii 2017, dhaqaalaha India wuxuu ahaa kii lixaad ee adduunka ugu weyn ee soo gala GDP  iyo saddexaadna ugu weyn iyada oo la iibsanayo sinaanta awoodda.  Ka dib markii dib loo habeeyay dhaqaalaha suuqa ee sannadkii 1991, Hindiya waxay noqotay mid ka mid ah dhaqaalaha ugu wayn ee koraya, waxaana loo tixgeliyaa waddan cusub oo warshad leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay sii wadi doontaa caqabadaha saboolnimada, musuqmaasuqa, nafaqo-xumada, iyo daryeel caafimaad oo aan ku filnayn. Dawlad hubka nukliyeerka ah iyo awoodda gobolka, waxa uu leeyahay ciidanka labaad ee ugu weyn dunida oo dhan, waxana uu ku jiraa shanaad kharashka militari ee ka dhex jira quruumaha. Hindiya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo ay maamusho nidaamka baarlamaanku waxayna ka kooban tahay 29 dawladood iyo 7 dhul-beereed. Waa jaaliyado badan oo kala duwan, jinsiyado kala duwan iyo jinsiyado kala duwan, waxayna sidoo kale ku nool yihiin noocyo kala duwan oo duur joog ah oo ku yaal deegaanno kala duwan.
Hindiya waxee leedahay Taariikh aad u dheer. wadanka waxuu jiri jiray kumanaan sano kahor. Gumeestihii ingriiska ayaa soo gumeestay Hindiya iyo pakistaan, markooda hore waxee ahaayeen hal wadan. waxeenaxornimada qateen1947kii, waa markii ee Bakistaan iyo Bangladesh ee ka go'day Hindiya.pakistan waxee hindiya ooga go'day kala duwanaashaha diinta. Hindiya waa wadan laga caabudo hindu, pakistaana waa wadan muslimiinta ku badanyihiin labada qeebood dagaalo badan ayaa dhexmaray sanado badan. Kadib sanadka marka uu ahaa 1948kii ilaa 49kii, Hindiya iyo pakistaan waxaa ka dhex jiray dagaalo dagaaladaas oo sabab u eheed kala qeebintii Gobolka Kashmir. Luqada ugu ween oo Hindiya looga hadlo waa af hindi iyo luuqada ingriiska Wadanka Hindiya waxaa laga caabudaa Lo'da
Lo Secretariat Building, a New Delhi, sèti dels burèus del govèrn.
Lengas principalas d'Índia.
doorashaddii ka dhacday hindiya 2007ii, waxaa madaxtinimada ku guuleestay, abuukaataha Pratibha Patil, waa naagta ugu horeeysay oo madaxweyne ka noqotay, wadanka Hindiya.
The brahminy kite (Haliastur indus) hunts for fish and other prey near the coasts and around inland wetlands.
Hindida waxee Khatar kuyihiin film soo saarka iyo heesaha, waxeena ka midyihiin kuwa aduunka ugu film soo saarka badan. Filmaha hindida waxaa badanaa aduunka looga yaqaanaa, Bollywood. Waxee isku magac egyihiin Hollywood laakiin Bollywood waxee soo saartaa filmada hindida kaliya. heesaha iyo filmaha hindida waxoo ka koobanyahay Jaceel. filmada hindida waxaa laga daawadaa wadamo badan oo ku yaalo Aasiya iyo geeska afrika, gaar ahaan, somalida oo xiiseeso.
Industria e ressorsas naturalas principalas d'Índia.
Lo capitèu de Sarnath en 1911.
Hindiya goboladeeda dhinaca woqooi bari, waxaa kaga dhagan (Himalaaya) qeebaha kale ee woqooyiga, dhaxbartanka ilaa dhinaca bariga waxaa ka baxo beero aad u badan oo dalag faro badan laga gurto. Dhinaca galbeedka oo xuduudka pakistaan kaga dhegenyahay waxaa ku yaalo saxaarada dahaar, Koonfurta wadanka waa meel baadiyo ah. Wadanka Hindiya waxuu leeyahay wabiyaal aad u badan oo waaweyn iyo Jasiirado markooda hore ka sameesmay fulkaano.
Boys playing football in Manipur.
Hindiya waa wadan dhax dhaxaad ah, oo roob ka da'o.
Gobolada hindiya waxee ka koobantahay 28 gobol. Template:Indian states and territories image map
5 Chhattisgarh CG Naya Raipur
9 Himachal Pradesh HP Shimla (summer), Dharmshala (winter)
20 Odisha OD Bhubaneshwar
28 Uttarakhand UK Dehradun (interim)
India visa Dalalka
↑ 1.0 1.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IMF database 2018
↑ Deccanchronicle.com http://www.deccanchronicle.com/140905/nation-current-affairs/article/vijayawada-andhra-pradesh-new-capital. Soo qaatay 27 December 2017. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ Newindianexpress.com http://www.newindianexpress.com/states/andhra_pradesh/Appointed-Day-T-state-to-Come-into-Being-on-June-2/2014/03/05/article2091595.ece. Soo qaatay 27 December 2017. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindiya&oldid=210246"